တရုတ် ကုမ္ပဏီ Deep Blue Aviation သည် Round A ရန်ပုံငွ ေဒေါ်လာ ၃၁. ၅ သန်း နီးပါး ရရှိ ခဲ့သည် – Pandaily
Jan 18, 2022, 12:05ညနေ 2022/01/18 15:23:35 Pandaily
Jiangsu Deep Blue Aerospace Technology Co., Ltd. သည် စီးပွားဖြစ် လွှတ်တင် ရေး ၀ န်ဆောင်မှုပေးသည့် အဆင့်မြင့်နည်းပညာ စီးပွားဖြစ် လေကြောင်း ကုမ္ပဏီ ဖြစ်ပြီး အင်္ဂါယွမ်သန်း ၂၀၀ နီးပါး တန်ဖိုးရှိသော Round A ငွေကြေး(ဒေါ်လာ ၃၁. ၅ သန်း) ။ ဤ အလှည့် ကို Zhencheng Capital ၊ DT Capital Partners, Galaxy Capital, ZY Capital နှင့်အခြား အဖွဲ့အစည်းများက ဦး ဆောင်သည်။ Deep Blue Aerospace သည် တရုတ်နိုင်ငံတွင် တစ်ခုတည်းသော ဒုံးပျံ ကုမ္ပဏီ ဖြစ်ပြီး အောက်စီဂျင် ရေနံဆီ ဒုံးပျံ များအား ဒေါင်လိုက် ပျံသန်း ခြင်းနှင့် ဆင်းသက် ခြင်းနှင့် ပြန်လည် အသုံးပြုခြင်း ကိုနားလည် နိုင်သည်။
ဤ အလှည့် အပြောင်း တွင် ရရှိသော ရန်ပုံ ငွေများကို အဓိကအားဖြင့် Xingyun-1 အရည် အောက်စီဂျင် ရေနံဆီ ဒုံးပျံ ၊ ဒုံးပျံ နှင့်သက်ဆိုင်သော ပြန်လည်အသုံးပြု နိုင်သော နည်းပညာ စစ်ဆေးခြင်းနှင့် စတင် ခြင်း ပြင်ဆင် ခြင်းနှင့် စွမ်းရည် အဖွဲ့များ တည်ဆောက်ခြင်းနှင့် လေ့ကျင့် ခြင်းတို့ အတွက်အဓိက အသုံးပြု လိမ့်မည်။ အနာဂတ်တွင် ကုမ္ပဏီသည် Nebula One ၊ Thunder Series တွန်းကန် အား နှင့် 3D ပုံနှိပ် ခြင်း ဖြည့်စွက် ထုတ်လုပ်မှု လုပ်ငန်းစဉ် များနှင့် ပြန်လည်အသုံးပြု နိုင်သော နှင့် ပြန်လည်အသုံးပြု နိုင်သော စွမ်းရည် များ ကိုစမ်းသပ် ခြင်းနှင့် သုတေသန တို့၏ သုတေသနနှင့် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု ကိုဆက်လက် အားဖြည့် လိမ့်မည်။
(ဓာတ္ပံု-Deep Blue Aerospace)
Deep Blue Aerospace ကို ၂၀၁၆ ခုနှစ်တွင်စတင် တည်ထောင်ခဲ့ပြီး Jiangsu ပြည်နယ်၊ Nantong တွင် အခြေစိုက် သည်။ ဘေဂျင်း (Yizhuang) နှင့် Xi ‘an, Shaanxi ရှိ ဒုံးပျံ နည်းပညာနှင့် အရည် အင်ဂျင် R & D စင်တာ များကိုလည်း လည်ပတ် သည်။ ၎င်းသည် Shaanxi ရှိ Tongchuan ရှိ ဒုံးပျံ စွမ်းအင် စနစ် ထုတ်လုပ်မှုနှင့် စမ်းသပ်မှု အခြေစိုက်စခန်း ရှိသည်။
Deep Blue Aerospace ၏ ဒုံးပျံ အင်ဂျင် ထုတ်လုပ်မှု နည်းပညာသည် တရုတ်နိုင်ငံတွင် ထူးခြား သည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် “ Thund-5” တွန်းကန် အား တွင်ပါဝင်သော အစိတ်အပိုင်းများ၏ ၈၅% သည် 3D ပုံနှိပ် ခြင်း နည်းပညာဖြင့် ထုတ်လုပ် သောကြောင့်ဖြစ်သည်။
၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လ အကုန်တွင် Deep Blue Aerospace သည် ၎င်း ၏ပထမဆုံး ဒေါင်လိုက် ပျံသန်း မှုနှင့် ဒေါင်လိုက် ဆင်းသက် မှု (VTVL) အခမဲ့ ပျံသန်း မှုကို ပြီးစီးခဲ့သည်။ ၂၀၂၁ ခုနှစ် အောက်တိုဘာလတွင် ကုမ္ပဏီသည် မီတာ ၁၀၀ VTVL ဒေါင်လိုက် ပြန်လည်ထူထောင်ရေး စမ်းသပ်မှု ကိုအောင်မြင်စွာ ပြီးစီးခဲ့သည်။ ဒေါင်လိုက် ပြန်လည်အသုံးပြု ခြင်းနှင့် ပြန်လည်အသုံးပြု ခြင်းတို့တွင် အောင်မြင်မှု များစွာ ရရှိခဲ့ပြီး Deep Blue Aerospace သည် အောက်စီဂျင် ရေနံဆီ ပြန်လည်အသုံးပြု နိုင်သော ပြန်လည်အသုံးပြု နိုင်သော ဒုံးပျံ နည်းပညာ တွင် ပြည်တွင်း ခေါင်းဆောင် တစ် ဦး ဖြစ်ကြောင်း ဖော်ပြသည်။
ဒါ့အပြင် ကြည့် ပါ:တရုတ်နိုင်ငံ၏ ဂြိုဟ်တု အသစ် လွှတ်တင် မှုသည် Long March လွှတ်တင် ရေး ယာဉ် ၏ ၄၀၀ မြောက် မစ်ရှင် ဖြစ်သည်
Startups Jan 18 ဇန်နဝါရီ 18, 2022